एजेन्सी, १६ चैत । कोरोना भाइरसको फैलावटको क्रममा के महिलाको जिन्दगीलाई गम्भीरतापूर्वक लिइँदैछ ? महिलालाई खासगरी अस्पतालमा ठिक नहुने उपकरणसँग काम गर्न परिरहेको छ जुन पुरुषको लागि बनेको हो ।
घरमा महिलाले बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा हुँदै रोगी आफन्तको समेत हेरचाह गर्नुपर्छ । बच्चाको पढाईको बारेमा पनि ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ । यस्तो बेला जतिबेला सिंगो विश्व नै कोभिड-१९ विरुद्धको लडाई लडिरहेको छ, के महिलाहरु पुरुषजस्तै सुरक्षित छन् वा उनीहरुले स्वास्थ्य जोखिम मोलिरहनु परेको छ ?
एक बेलायती शीर्ष नेता अम्बर रडले बीबीसीलाई भने, ‘म यो कुरालाई लिएर चिन्तित छु कि यो सम्पूर्ण संकटमा महिलाको जिन्दगीलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन ।’
जब जब कोभिड-१९ संसारभरीमा फैलिरहेको छ, महिलाहरु पुरुषको तुलनामा बढी जोखिमयुक्त अवस्थामा बाँचिरहेका छन् भन्ने सवाल उठिरहेको छ ।
के महिलाहरु निर्णय लिने प्रक्रियामा पूर्णरुपमा सहभागी छन् ?
यो बहसमा अब अधिकारकर्मी र अन्य सामाजिक संगठनहरु पनि जोडिएका छन् । उनीहरुका अनुसार महिलाले वृद्ध बाआमा र बिरामी आफन्तको हेरचाहको लागि धेरै समय दिनुपर्ने अवस्था चिन्ताजनक छ ।
घरमा थुनिएका बच्चाहरुको मनोरञ्जन र उनीहरुको पढाईको चिन्ता गर्नु पनि महिलाकै जिम्मामा रहन्छ । महिलाले घरबाटै पूर्णकालीन जागिरको काम गरिरहेको अवस्थामा पनि महिलाले यी सबै कामहरु गर्नुपर्छ ।
अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा रहेका महिला स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुनासो पनि यस्तै छ । उनीहरुले सामान्यतः आफ्नो शरीरमा ठिक नहुने उपकरणहरु र स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गर्नु परिरहेको छ जुन पुरुषका लागि भनेर डिजाइन र निर्माण गरिएका हुन्छन् । यी सामग्री र उपकरण निर्माण गर्नेको दिमागमा केवल पुरुषको शारीरिक बनावट र आकारको मात्रै राखिन्छ ।
कसले गरिरहेको छ महिलाको चिन्ता ?
रड भन्छिन्, ‘म चाहन्छु कि निर्णय लिने प्रकियामा धेरै महिलाहरु सहभागी गरिनुपर्छ ।’
उनको चिन्ता सरकारको सबैभन्दा उच्च स्तरीय बैठकहरुमा भाग लिन महिलाले कति अवसर पाइरहेका छन् भन्ने विषयमा छ । उनले ट्वीट गर्दै भनिन्, ‘बराबरीको अर्थ हो राम्रो निर्णय गर्नु । संकटको बेला महिलाहरुलाई टाढा नबनाऊ ।’
उनको यो ट्वीटपछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा तिखो बहस छेडियो । रडले बीबीसीलाई भनिन्, ‘विविधताको अर्थ हो सर्वोत्तम फैसला गर्नु । मेरो अनुभवको हिसाबमा भन्दा मात्रै महिलाले मात्र महिलाको जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तु उठाउँछन् ।’
उनी चाहन्छिन्- महिलालाई आफ्नो महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सरकारले सहभागी बनाउनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा महिला हुनैपर्छ ताकि घरेलु जिन्दगी, घरेलु प्रताडना, शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरु उठोस् ।
महिलावादी लेखिका तथा सामाजिक कार्यकर्ता कैरोलिन क्रियार्डो पेरेज यी विषयहरुमा सहमति जनाउँछिन् ।
उनले बीबीसीसँग भनिन्, ‘जति पनि कुरा हामीले यहाँ देखिरहेका छौं, यस्तो अवस्थामा महिला यो महामारीको जोखिममा जाँदा अत्यधिक खतरा पैदा भएको छ । यो खतरा आर्थिक र शारीरिक दुवै प्रकारका हुन्छन् ।’
पेरेज अगाडि थप्छिन्, ‘कुनै पनि रोग फैलँदा महिला यसको सबैभन्दा अग्रमोर्चामा हुने सम्भावना हुन्छ किनकि यी महिलाहरुमा धेरैजसो नर्स, सरसफाई मजदुर र बिना तलब हेरचाह गर्ने गृहिणी महिला हुन्छन् ।’
उनले २०१४ मा अफ्रिकामा फैलिएको इबोलाको उदाहरण दिएकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘त्यतिबेला अफ्रिकामा मर्ने मानिसहरुमध्ये ७५ प्रतिशत महिला थिए । यस्तो होइन कि भाइरसले महिलालाई बढी रुचायो, कारण त के थियो भने महिलाहरु रोगी मानिसको स्याहारमा सबैभन्दा अगाडि थिए ।’
पेरेज भन्छिन्, ‘यो एउटा ठूलो चिन्ता हो र म चिन्तित छु कि जस्ता कदमहरु उठाइरहिएको छ, त्यसमा यी सवालहरुलाई ध्यान दिइएको छैन ।’
आर्थिकरुपमा सबैभन्दा ठूलो चोट महिलामाथि
क्रियाडो पेरेजका अनुसार यसको आर्थिकरुपमा पनि दुश्परिणाम निस्कन्छन् । उनी भन्छिन्, ‘सेवा क्षेत्रमा महिलालाई सबैभन्दा बढी जागिरको अवसर आउँछ । यही क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी महामारीको असर रहेको छ ।’
उनले सरकारहरुसँग यस्ता समस्या हल गर्ने नीति नै नभएको जिकिर गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘इतिहास साक्षी छ, यदि तपाईं महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुहुन्छ भने यी समस्याहरुको समाधान निस्कने बढी अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
बेलायतको संसदमा गरिएको एक अनुसन्धानका अनुसार, पुरुष र महिलाको प्राथमिकताका मुद्दाहरु नै फरक हुन्छन् । अनुसन्धानका अनुसार पुरुषहरु बढी जोड युद्ध र तुलना गर्नमा दिन्छन् भने महिलाहरुको प्राथमिकता हेरचाह र शिक्षामा हुन्छ ।
उनी अगाडि थप्छिन्, ‘साथै तथ्यांकहरुले पूरै अर्गनाइजेशन फरक इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डिभलपमेन्ट (ओईसीडी)को संसदमा जति धेरै महिला सहभागी छन् त्यति नै बजेट शिक्षा र सामाजिक हेरचाहमा जाने देखाएको छ ।’
लिङ्ग र मृत्यूदर
अहिलेसम्मको पूरै संसारको तथ्यांकले भनिरहेको छ- कोभिड-१९ बाट महिलाको तुलनामा पुरुषको मृत्यू बढी भइरहेको छ । तर, क्रियाडो पेरेज भन्छिन्, ‘दीर्घकालमा धेरै महिला यसबाट नराम्रोसँग प्रभावित हुनेछन् ।’
उनी भन्छिन्, ‘इबोलाको सवालमा, महिलाहरु सुरुवातमा धेरै मरेका थिएनन् । तर पछि स्थिति बदलियो किनकी महिलाले यो रोगको जोखिमको धेरै सामना गर्नुपर्‍यो र यस्तो काममा महिलाको सहभागिता हुने धेरै सम्भावना थियो । उनीहरुले उक्त जोखिमलाई ठूलो मात्रामा झेल्नु परेको थियो ।’
क्रियाडो-पेरेजका अनुसार अहिले पनि महिला धेरै जोखिममा काम गरिरहेका छन् । महिलाहरु अस्पतालमा क्लिनर्स र कपडा धुने कामदारको रुपमा काम गरिरहेका छन् जसमा अरुलाई जस्तो निश्चित सुरक्षा छैन ।’
साथै, नर्सहरु जो बिरामीसँग अत्यन्तै नजिकबाट काम गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरुसँग उनीहरुको अनुहारमा ठिक हुने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रायः हुँदैनन् ।
उनी भन्छिन्, ‘मलाई लाग्दैन कि यी चिजहरुको बारेमा सरकारमा उच्च स्तरमा कोही छलफल भइरहेको छ । यो एकदमै तनाव दिने विषय हो ।’
गोरा पुरुषको असर र विविधताको कुरा
क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीकी मनोवेत्ता तथा विचार र अनुभूतिको व्यवहारबारेकी विज्ञ डा. सिमोन श्नाल भन्छिन्, ‘महिलासँग जोखिमबाट बच्ने धेरै रुझान हुन्छ । साथै उनीहरुको पुरुषको तुलनामा गम्भीर खतरा धेरै देख्न पाउँछन् ।’
उनी भन्छिन्, ‘अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ कि निर्णय लिने कुरामा महिला र पुरुषको अन्तर हुन्छ । यस्तो कुरा खासगरी अनिश्चितताको बेला वा जोखिमको माहौलमा देखिन्छ । जब कुरा व्यक्तिगत नोक्सान वा खतराको हुन्छ तब महिलाले यस्तो जोखिम छिट्टै बुझिहाल्छन्, जबकि पुरुषसँग यस्तो हुँदैन ।’
डा. श्नालको अनुसन्धानमा सामाजिक मनोविज्ञान र संज्ञानात्मक विज्ञानको खोजी गरिएको छ । उनका अनुसार यो कुरा केवल जेन्डरसम्म सीमित छैन बरु यसमा जनसंख्याको पनि महत्व हुन्छ ।
उनी भन्छिन्, ‘उदाहरणको रुपमा कथित ‘गोरा पुरुष प्रभाव’को पनि साक्षी छ । महिला र जातीय अल्पसंख्यकको तुलनामा गोरा पुरुषमा जोखिमलाई कम आँक्ने अभ्यास हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरु अन्यको तुलनामा खतरा र अन्य चुनौतीलाई देख्न सक्दैनन् ।’